ဘယ်က Windows Laptop ကိုတစ်ဦးက MacBook Pro ကိုအစားထိုးနိုင်? - သတင်း Rule
ဘယ်က Windows Laptop ကိုတစ်ဦးက MacBook Pro ကိုအစားထိုးနိုင်?
ပက်ထရစ်သူသည်မိမိအဟောင်းများကိုစက်ကိုအစားထိုးမယ့် Windows က laptop ကိုရှာနေင်ဒါ Macs ကသူ့စျေးနှုန်းအကွာအဝေးထဲကယခုကပြောပါတယ်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ဘယ်က Windows Laptop ကိုတစ်ဦးက MacBook Pro ကိုအစားထိုးဖို့နိုင်?” ဂျက် Schofield ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 17 နိုဝင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2016 10.21 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အခု Apple က Macs စျေးနှုန်းအစား steeply တက်ကြပြီ, သူတို့သည်ငါ၏စျေးနှုန်းအကွာအဝေးထဲကနောက်ဆုံးများမှာ. ငါတတ်နိုင်သမျှနီးနီးကပ်ကပ်ကြောင့်လိုက်ဖက်မယ့် PC ကိုနဲ့ငါ့က MacBook Pro ကိုအစားထိုးချင်ပါတယ်: ကောင်းစွာ-built, အားကောင်းတဲ့, ယုံကြည်စိတ်ချရသော, အစာရှောင်ခြင်း, နှင့်ကောင်းတစ်ဦးနှင့်အတူ, ချွန်ထက်သောမျက်နှာပြင်. ငါသည်ခပ်သိမ်းသောပုံမှန်အတိုင်း surfing အဘို့အကြှနျုပျ၏ Mac ကိုအသုံးပွုရ, ဗီဒီယိုကြည့်, ဒါတွင်တေးဂီတကိုနားထောငျနှင့်. ငါသည်လည်းပိုပြီးပေါ့ပေါ့တော်တော်ကြီးကြီးမားမား Adobe က Photoshop ကိုသုံးပါနှင့်ဗီဒီယို-editing software ကို. ငါ Laptop ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ် desktop ပေါ်မှာတစ်ခုခုကိုမှပွင့်လင်းတယ်. ပက်ထရစ်
အဟောင်းကိုစကားပုံကရှိပါတယ်အဖြစ်: "ကောင်းမွန်သော, စျေးပေါ, အစာရှောင်ခြင်း - ဆိုနှစ်ခုကောက် "ဒီက Windows laptops တွေအတွက်အထူးသဖြင့်မှန်သည်။, ကုမ္ပဏီတွေများစွာစျေးနှုန်းအပေါ်အဓိကအားဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်ရာ.
အမှုအရာ Apple အတွက်ကွဲပြားခြားနား. MacBook တွေ၏တစ်ခုတည်းသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအဖြစ်အဲဒါကို likes အဘယ်သို့ပြုနိုင်. ဤသည်က၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်မကြိုက်ဘူးအမှုအရာအကျင့်ကိုကျင့်များလည်းပါဝင်သည်, ထိုကဲ့သို့သောဂဟေ SSD ပါနဲ့ memory chip တွေကို motherboards မှ and drop MagSafe အဖြစ်, SD က slot နှစ်ခုနှင့်စံကို USB3၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ် MacBook Pros ကနေဆိပ်ကမ်းများ. ဤသည်ကို Windows ဈေးကွက်ထဲမှာသတ်သေလိမ့်မယ်, ဝယ်လက်စက္ကန့်အတွင်းပေးသွင်းပြောင်းနိုင်သည်ဘယ်မှာ.
ဒါပေါ့, ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုသူများကိုကွဲပြားခြားနားသောအမှုအရာလိုခငျြ, ဒါကြီးတွေပေးသွင်း - Lenovo က, Dell က, HP က, Asus က, Acer မှစသည်တို့ကို - မတူညီတဲ့ဈေးကွက် segments များအတွက်မတူညီသောပ္ပံရှိ. Dell က, ဥပမာအားဖြင့်, စားသုံးသူများအဘို့သုံးပ္ပံစေသည် (Inspiron, XPS, Alienware), စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသုံးပြုသူများအတွက်သုံးပ္ပံ (လတီ္တတွဒ်, OptiPlex, စေ့စပ်သေချာခြင်း), နှင့် soho များအတွက် Vostro အကွာအဝေး (သေးငယ်တဲ့ရုံး / အိမ်ကရုံး) ဈေးကွက်. ထို့ကြောင့်ဘတ်ဂျက် / စျေးနှုန်း-ထိခိုက်မခံတဲ့ဝယ်လက်တွေလည်းရတာကိုတွေ့ရပါတယ် (Inspiron နှင့်လတ္တီတွဒ်), ဂုဏ်သိက္ခာ / အရည်အသွေးမြင့်သတိဝယ်လက် (XPS, OptiPlex), နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်-oriented / လိုလားသူဝယ်လက် (Alienware ဂိမ်းစက်တွေ, တိစက်).
MacBook တွေ scheme ကိုဒီလိုမျိုး fit ပါဘူး. သူတို့က Over-အင်ဂျင်နီယာအများဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လုံလောက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုနှင့်အတူစားသုံးသူလက်တော့ပ်နေ. များသော Windows ကို Laptop ကိုထုတ်လုပ်သူစားသုံးသူဒီဇိုင်းများဘို့လိုလားသူစျေးနှုန်းတွေကိုအားသွင်းနိုင်, Microsoft ကတစ်ဦးသွားလာရင်းရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်သော်လည်း.
ရလဒ်အနေဖြင့်, သငျသညျအလျှော့ပေးလိုက်လျောရန်ရှိသည်လိမ့်မည်. သို့သော်, သင်သည်များစွာသောအရိုအသေအတွက် MacBook တွေနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ကြောင်း Windows ကိုလက်တော့ပ်ရှာတှေ့နိုငျ, ဒါပေမယ့်စျေးနှုန်းချိုသာ. ရုံထိုကဲ့သို့သော Dell ရဲ့ XPS အဖြစ်အမျိုးမျိုးသော "ဂုဏ်သိက္ခာ" စားသုံးသူအပိုင်းအခြားများအတွက်ကြည့်ရှု, HP ရဲ့ Spectre နှင့် Asus ကရဲ့ Zenbook.
Apple ကအသစ် MacBook Pro ကိုလက်တော့ပ်ထုတ်လွှတ်မယ့်လိုက်ပါတယ်. £ 1,449 မှာမှတ်ဉာဏ်၏ 13in က Intel Core i5 ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူ Pro ကို MacBook နှင့် 8GB သုံးဗားရှင်းရှိပါတယ်, £ 1,749 နှင့်£ 1,949. အသစ် 15in MacBook Core i7 processors ကိုအတူ Pros နှင့် 16GB £ 2,349 နှင့်£ 2,699 ဘို့မှတ်ဉာဏ်လည်းရှိပါတယ်. အားလုံးစျေးနှုန်းများ VAT သော်လည်းမဆိပ်ကမ်း Adapter ကသို့မဟုတ် AppleCare အထောက်အပံ့ပါဝင်.
သငျသညျအကြှနျုပျကိုတစ်ဦးဘတ်ဂျက်မပေးခဲ့ကြ, ဒါပေမယ့် Apple ရဲ့စျေးအချိုဆုံးအသစ် MacBook Pro နှင့်စျေးနှုန်းများ halving £ 725 မှ£ 1,200 ၏အကွာအဝေးအကြံပြုမယ်လို့. ဒါကအဟောင်းပ္ပံကနေအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူကဲ့သို့တူညီသော ballpark အတွက်ဖြစ်ပါသည် - £ 949 နှင့်£ထားသော 1,249 မှာ MacBook လွှင် 13in, ငါသည်သင်တို့ကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်ဟုယူဆသော - £ထားသော 1,249 မှာ MacBook ပေါင်း.
အဆိုပါ Dell က XPS 13 နှင့် 15 MacBook တွေဖို့အထင်ရှားဆုံးရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်. ကံမကောင်းသဖြင့်, သူတို့ကဒီစျေးနှုန်းအကွာအဝေးရဲ့ထိပ်မှာ. သင်ဆဲဟောင်း-မော်ဒယ်ရနိုင် XPS 13 (9350) £ 899 များအတွက်, သို့သော်မှတ်ဉာဏ်ကိုသာ 4GB နှင့်အတူ Core i5-6200U ရှိပါတယ်. နောက်ဆုံးပေါ် 9360 ဗားရှင်း တစ်ဦး 2.5GHz Core i5-7200U ရှိပါတယ်, 8£ 999 အဘို့မှတ်ဉာဏ်၏ GB လောက်နှင့်တစ်ဦး 128GB SSD ပါ. သငျသညျ£ 1,099 မှာ 512GB SSD ကိုအဘို့အသွားလျှင်, သငျသညျကိုသာအသစ်တစ်ခုကို 2.0GHz က MacBook Pro ကိုအပေါ်£ 400 ချွေတာနေ.
အဆိုပါ Dell က XPS 15 ပိုကောင်းတဲ့တန်ဖိုးကဖြစ်ပါတယ်. သင်တစ်ဦး Core i7-6700HQ ရ, 8မှတ်ဉာဏ်၏ GB ကို, ဗီဒီယိုမှတ်ဉာဏ် 2GB ပါအတူ Nvidia GeForce GTX 960M ဂရပ်ဖစ်, နှင့်£ထားသော 1,249 များအတွက် 256GB SSD ပါ. ဒါဟာ Thunderbolt ရှိပါတယ်3ဆိပ်ကမ်း, နှစ်ဦးကို USB 3.0 ဆိပ်ကမ်းများ, HDMI နဲ့တစ်ဦး SD ကဒ် slot ပါ. ဒါဟာ 15in မျက်နှာပြင်နှင့်အတူစက်များအတွက်လည်းအသေးစားနှင့်အလင်းရဲ့. ဒါဟာအစီအမံ 357 x က 235mm (အကြမ်းအားဖြင့် 14 x က 9in) နှင့် 1.78kg အလေးချိန် (3.9ပေါင်). ဤသည်နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ် 349 x က 241mm နှင့် 1.83kg (4.02ပေါင်) သစ် "ပိုမိုပါးလွှာပြီးပေါ့ပါး" MacBook Pro အဘို့ 15, သော£ 1,100 ပိုပြီးကုန်ကျ.
HP ရဲ့ Spectre x360 အကွာအဝေး Dell ရဲ့ XPS အကွာအဝေးမှအလားတူ features တွေကိုကမ်းလှမ်း, လူအပေါင်းတို့သည် x360 လက်တော့ပ်သင်သည် "တဲကို" ဖွင့်ဖို့ကိုလှည့်နိုင်မထိဖန်သားပြင်ရှိသည် မှလွဲ. (ရုပ်ရှင်ကြည့်ဘို့ဥပမာ) သို့မဟုတ် tablet စစ်ဆင်ရေး.
အဆိုပါစျေးအသက်သာဆုံးမော်ဒယ် HP က် Spectre x360 13-4126na ဖြစ်ပါသည်. ဒါက 13in မျက်နှာပြင်ရှိပါတယ်, တစ်ဦး Core i5-6200U ပရိုဆက်ဆာ, 8£ 999 အဘို့မှတ်ဉာဏ်၏ GB ကိုနှင့် 256GB SSD ကို. သငျသညျပိုကောင်းမျက်နှာပြင် resolution နဲ့တစ်ဦး HP က် Spectre x360 13-4129na မှ upgrade နိုင်သည် - 2560 x က 1440 အစား 1920 x က 1080 - ပေါင်းတစ် 2.5GHz Core i7-6500U နှင့် 512GB SSD ကို£ 1,199 များအတွက်. တစျဖနျ, ဒီ 2.0GHz MacBook Pro နှင့်ထက်အများကြီးစျေးသက်သာမဖြစ် 13.
သို့သျောလညျးကိုထပ်, အဆိုပါ 15in HP က် Spectre x360 15-ap007na ပိုကောင်းတဲ့တန်ဖိုးကဖြစ်ပါတယ်. သာ£ 100 ဦးထက်ပိုသောအဘို့, သင်တစ်ဦး 4K ရ (3840 x က 2160) ဖန်သားပြင်, Intel ရဲ့ Iris ကဂရစ်ဖစ်အတူ Core i7-6560U 540, 16မှတ်ဉာဏ်၏ GB ကို, နှင့် 1.82kg စက်အတွက် 512GB SSD ကို. တောင်မှ£ 1,299 မှာ, ဒါဟာနေဆဲသစ်ကို MacBook Pro နှင့်ထက်£ 1,050 စျေးနှုန်းချိုသာဖွင့် 15.
သငျသညျကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင် Lenovo က ThinkPad T560, တစ်ဦးအားကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါသည်, £ 751,19 မှာစတင်သည်ကြောင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ် 15.6in လက်ပ်တော့. အဓိကဆွဲဆောင်မှုကိုသင်ရွေးချယ်စရာကြီးမားတဲ့အကွာအဝေးနှင့်အတူတစ်ဦး menu ကနေတစ်ခုကိုစိတ်ကြိုက်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. သင်တစ်ဦး Core i5-6200U နှင့်တသားတ get နိုင်, 8မှတ်ဉာဏ်၏ GB ကို, 2GB နှင့်အတူ Nvidia GeForce 940MX, တစ်ဦး 256GB SSD ကိုနဲ့ Windows 10 £ 901,19 များအတွက်နေအိမ် - နှင့် On-site ကိုဝန်ဆောင်မှု၏သုံးနှစ်ကပါဝင်သည်. 47WHr ထံမှ 72WHr မှဒုတိယဘက်ထရီအဆင့်မြှင့်အခြား£ 12 add မယ်လို့. 16GB ဖို့ RAM ကိုအဆင့်မြှင့်£ 52,80 add မယ်လို့. တစ်ဦး Core i7-6600U ဖို့ CPU ကိုအဆင့်မြှင့်£ 260 add မယ်လို့.
အဆိုပါ Asus က Zenbook ထို့အပြင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ Apple ကစတိုင်လူမီနီယံကိုယ်ထည်ဆောက်လုပ်ရေး၏အယူခံစေခြင်းငှါ, သူတို့တကယ်က MacBook နဲ့ MacBook Air ကိုအသုံးပြုသူများကရည်ရွယ်နေသော်လည်း. အဆိုပါ က Zenbook UX330UA-FB025T နှင့် 3200 x က 1800 ဖန်သားပြင်, core i5-6200U, 8မှတ်ဉာဏ်နှင့် 256GB SSD ကို၏ GB ကို£ 749,99 မှာကောင်းသောတန်ဖိုးကိုဖြစ်ပါသည်. PC ကိုကမ္ဘာ့ဖလားအလားတူရှိပါတယ် £ 649,99 အဘို့အ UX310UA, သင်တို့ပတ်လည်စျေးဝယ်မယ်ဆိုရင်နှင့်သင်သည်များစွာသောသည်အခြားမော်ဒယ်များရှာတှေ့နိုငျ.
ဖြစ်နိုင်သည်ဈေးအပေါဆုံးပဲ-အကြောင်းကို-အလားအလာ option ကို 14in ဖြစ်ပါသည် Lenovo IdeaPad 510S, ဆင်း Zenbook ကနေခြေလှမ်းရာဖြစ်ပါသည်. လူအားလုံးတို့သည်အမျိုးမျိုးသောမော်ဒယ်များရှိ 1920 x က 1080-pixel ဖန်သားပြင်နှင့်မှတ်ဉာဏ်၏ 8GB. Lenovo ရဲ့ website တွင်စျေးအချိုဆုံး£ 509,99 များအတွက် 2.4GHz Core i3-7100U နှင့် 128GB SSD ကိုရှိပါတယ်, စျေးအကြီးဆုံး£ 599,99 များအတွက် 2.9GHz Core i5-6267U နှင့် 256GB SSD ကိုရှိပါတယ်စဉ်. သို့သော်, ယောဟနျသ Lewis က £ 599,99 များအတွက် Core i7-6567U နှင့်အတူငွေများထဲမှရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ကြည့်ရကျိုးနပ်ပါလိမ့်မယ်.
ဒါပေါ့, စျေးနှုန်းချိုသာသည် Windows လက်တော့ပ်ရာပေါင်းများစွာရှိပါတယ်, မှာစတင် ထက်နည်း£ 150. ဒါဟာသင့်ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းများ drop ဖို့လိုလိုလားလားရှိပုံကိုဝေးမူတည်. chips ပိုက်ဆံကုန်ကျ, ဒါကြောင့်တစ်ဦးအခြို့သောအချက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော, စျေးနှုန်းလျှော့ချမှု၏အရည်အသွေးအပေါ်လိုက်လျောကနေလာမယ့်စေခြင်းငှါ, ကီးဘုတ်, trackpad နဲ့မျက်နှာပြင်. သူတို့ကိုချိုးဖျက်ခဲ့လျှင်, သင်ရုံအခြားဝယ်ဖို့.
သင်က "လက်တော့တစ်ခုသို့မဟုတ် desktop ကိုဖြစ်စေရန်ဖွင့်လှစ်" နေဖော်ပြထားခြင်း. ဒါကြောင့် အကယ်., သင်တစ်ဦး desktop ကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပိုပြီးအာဏာနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန် Ergonomics ရနိုင်. ကျွန်မ၌ဤပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဖုံးလွှမ်း ဘယ်ဒက်စ်တော့ PC ကိုငါအိမ်ပြန်ထံမှအလုပ်လုပ်ဘို့ကိုဝယ်သင့်ပါတယ်? သင်တစ်ဦး Lenovo က ThinkCenter M800 အဘို့အသှားလြှငျ, သင်တစ်ဦး ThinkPad T560 Laptop ကို configure လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကဲ့သို့တူညီသောရွေးချယ်စရာအများအပြားရှိသည်မယ်လို့. သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဆင့်မြှင့် add နိုင်လိမ့်မယ်လို့ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အခြားငါးနှစ်သို့မဟုတ်သမျှပြီးနောက်.
သငျသညျအလျင်သင့်ရဲ့ Laptop ကိုအစားထိုးရန်ရန်မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်, Apple ကတစ်ဗားရှင်းသစ်ထုတ်ဆောင်ခြင်းရှိမရှိသင်မြင်ရန်စောင့်ဆိုင်းနိုင် Apple Mac Mini ကို နောက်နှစ်. လက်ရှိမော်ဒယ်အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည် 2010 ကျော်နှစ်နှစ် updated ရသေး. ဒါဟာတကယ်တိုးချဲ့မယ့် - အလွန်ကောင်းသောတန်ဖိုးနှင့်မရ - ထိုမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာရှိတာပါဖြစ်ပါတယ် (£ 479 မှ£ 949), ဒါပေမယ့်အသေးင်ကြောင့် MacOS ပြေး. တစ်ဦးက 21.5iMac သစ်အတွက် (£ 1,049 မှ£ 1,449) အရမ်းတစ်ခု option ကိုဖြစ်နိုင်.
49175	1 အပိုဒ်, ဂျက်မေးပါ, computing, အင်္ဂါရပ်များ, ဂျက် Schofield, laptop များ, နည်းပညာ, ဗြိတိန်နိုင်ငံနည်းပညာ, Windows ကို
← အမေဇုံ: Echo: ပထမဆုံး 13 ကြိုးစားပါမှအမှုအရာ အမေဇုံ: Echo Dot ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း →